UDona Matoshi Uzisa Idrama kunye nomthamo kunye noYilo oluMileyo lweYilo
WHat unjani umtshakazi? Okanye, uluhlobo luni lweendwendwe zomtshato? Ngaba ungomnye wokuhambelana nemigaqo; Uhlobo lokuthambekisa kakhulu okanye omnye ukuzisa idrama, ajike iintloko aze ababantu bathethe ngesinxibo sakho kangangeentsuku, iiveki okanye iinyanga xa kuphela? Ukuba ungowokugqibela, ngoko wamkelekile kwihlabathi lomyili wefashoni kak Matoshi.
UDona ngumyili wemfashini ovela kuPrishtina, Kosovo ochaza ngendlela ekhethekileyo - ethobela uyilo lobugcisa ekholelwa ukuba ngaphezulu! Uyawuqonda umzimba wabasetyhini kwaye uyibhiyozela le nto ngokusebenzisa iinkcukacha ezintsokothileyo kwizicucwana zakhe. Isakhono sikaDona Matoshi ekuyileni kunye nasekwenzeni ii-dress-oover ezifanelekileyo zokunxiba zinomtsalane kunye nerve-efanelekile.
Imvelaphi yendalo yakhe ibisoloko imenza okhethekileyo kwaye konke oku kuyibulela ngokuzinikela kwakhe kunye netalente. Umyili wefashoni unikezela kwiimfuno zengubo yamagama amaninzi owaziwayo kwihlabathi. Ngo-2017, umyili wayila ingubo emnyama emnyama kaMiss World Tanzania 2017, UJulitha Kabete.
Ulahle iTanzania 2017 Julitha Kabete
Ukhuthazwe zezinye zezinto ezidaliweyo zikaDona Matoshi…
Ityala lemifanekiso: IG | Donamatoshiofficial
Ukuvuselela iAsoebi Ukuvuselelwa komtshato abaqulunqi be-couture kak Matoshi Uyilo lwedona matoshi Imfashini ye-dona matoshi dona matoshi instagram UJulitha Kabete Inguqulelo yamva nje yomtshato I-Miss World Tanzania 2017